“ အချစ်သီချင်းတစ်ပုဒ်က သင့်အပေါ်မှာ ဘယ်လိုခံစားချက်တွေ ဖြစ်ပေါ်စေလဲ။ ”
(ဆုံစည်းဖို့နေ့ရက်လေး ငါအချိန်တွေလက်ချိုးရေ)ဆိုတဲ့ စာသားလေးက်ု ရွတ်တ်ုင်း သီရ်အောင် အရမ်းဘဲသတိရတယ်။ကျောင်းတွေလည်းဖွင့်ချင်လှပါပြီ။
အချစ်သီချင်းတိုင်းထက် ကိုယ်နဲ့ခံစားချက်တိုက်ဆိုင်တဲ့ သီချင်းတွေကို ကြိုက်တတ်ကြတယ်လေ အသည်းခွဲတတ်သူတွေ များလာလို့ပဲ အသည်းကွဲသီချင်းတွေကို အကြိုက်များလာတာများလား... ကျွှန်မ အသည်းကွဲသီချင်းတွေကို ခံစားတတ်ခဲ့တာ 3နှစ်ရှိပြီး "မညီမျှခြင်း..အပြစ်မမြင်" ခံစားချက်တူတယ်လေ...
Akon ဆိုတဲ. "Rriht now (na na na) က တကယ်မြူးကြွတဲ.သီချင်းပါ ။ဒီ music ကိုနားထောင်ပြီရင်းနားထောင်ချင်ပါဘဲ။AKON music တွေကို ကျွန်တော်ကတော.အကုန်ကြိုက်ပါတယ်။သူငယ်ခင်းတွေလည်းနားထောင်ပါလို.................
Post By : bluepink999
Love songs give me missing someone.I want to know how he feel?
Post By : tgi girl
tat yout thaw thu ko tha ti ra tal. kansar chat tu nay yin pot.
သူငယ်ချင်းများအားလုံးခင်ဗျာ။တကယ်လို့သင်ဟာကော့သောင်းမြို့၊ဒါမှမဟုတ် Mandalay မှာနေနေတယ် ။ရောက်ရှိနေတယ်ဆိုရင် ဟိန်းထက်၊ အေးချမ်းမောင်(ခ)အောင်နိုင်ဦး(ခ)အေးချမ်းညောင် တို့ကို အကြောင်းကြားပေးပါခင်ဗျာ။အပန်းမကြီးဘူးဆိုရင်ပေါ့ဗျာ။သူငယ်ချင်းနှစ်ယောက်ကိုအရမ်း လွမ်းပြီးအဆက်အသွယ်လည်းမရလို့ပါ။ကျေးဖူးနော်။ရခဲ့ရင် minpyingmyatthu@gmail.com or 7minpying@gmail.com ကိုဆက်သွယ်လိုက်ပါခင်ဗျာ
ဟင်္သာတ က မောင့်ကိုသတိရတရ် မောင်ကော ရန်ကုန်ကကျွန်မ ကို သတိရရဲ့လား OCT 28 ကျ ရင် ပြန်ဆုံမယ်နော်
Post By : jenny
Post By : ma
Post By : တော်ဝင်နတ်သမီး
ချစ်သူကိုလွမ်းတယ်....သတိရတယ်....ချစ်ခဲ့ရတဲ့အချိန်တွေကို ပြန်မြင်ယောင်တယ်။ ကြည်နူးစရာလေးတွေကို အချစ်သီချင်းလေးနဲ့ ဆိုတော့ ပိုပြီးခံစားလို့ကောင်းတာပေါ့....ဟုတ်တယ်ဟုတ်...!
Post By : swam (bab3 lay ရဲ့မောင်)
သူကို အရမ်းချစ်တယ် အဲလို့အရမ်းချစ်တာကိုလည်း ဖွဲ့ဖွဲ့နွဲ့နွဲ့လည်းမပြောတတ်ဘူး သူမသိမှာကိုအရမ်းစိုးရိမ်နေတယ်
Post By : ကလေးလေး
ချစ်သူမောင်နဲ့ ခွဲနေရတဲ့အတွက် သတိရလွမ်းလို့ရူးတော့မယ်။"လေပြေ" သီချင်းက်ုကြားတိုင်း မောင့်ကိုသိတိရမိပါတယ်။သီချင်းလေးအတိုင်း မောင်နဲ့ နီးရမယ့်ရက်လေးကို စောင့်နေမိပါတယ်။မောင်လည်း မေ့မနေနဲ့နော်။
Post By : မောင့်ကိုချစ်တဲ့သဲ
koe khan sar chat nae tu nyi tae songs tawe ko pyaung lae nar htaung yin thu ko lwan nay ya dar tawe ko that thar say ng tae so tot ...........
Post By : mal hnin
ခံစား တတ် လွယ်တာကြောင့် အချစ်သီချင်း တို့ အလွမ်း သီချင်း တွေကို နား ထောင်လိုက်တိုင်း...ခံစား ချက်က သီချင်း စာသား နောက်ကို ပါသွား တာပါပဲ
Most of them are good to listen.But few are silly and boring to listen the old words again and again.
ခံစားချက်နဲ့တူနေတဲ့အချိန်ဆိုရင် အချစ်သီးချင်းနားထောင်ရတာ အရမ်းကြိုက်တယ်
Post By : crazieradol
Where are you my Angle?
Post By : Yu
တချို့သော သီချင်းတွေက ငါဘ၀ကို ထိုင်ကြည့် နေသလိုပါပဲ
Post By :ုခိုင်လေး
Post By : ကြင်နာတင့်ဇော်
a lon song twe listen pee taw chit thu ko very remember taw i ka chit thu na away mar yout nay tar chit thu ko pyaw pae kha par thu ko very love tae lo thanks for write on this paper
Post By : kyaw kyaw
chitthukoayanlontae bae lo lope ya ma lae i ko advice nae nae oay kha oo
ဘာသီချင်းပဲနားထောင်နားထောင် ဂီတာnotes တွေပဲကြားနေရတယ်။
အိမ်ထောင်ရေးသဘောတွင်…………… ခုတင်ကိုလည်းမနှဲ့နှင့် လင်ကိုလည်းမရွဲ့နှင့် ခုတင်ကိုနှဲ့တော့ စရွေးချောင်ပြီး မြည်တတ်သည် လင်ကိုရွဲ့တော့ဘေးရှောင်ပြီးကြည်တတ်သည် အဖျားကိုလည်း မကြီးစေနှင့် မယားကိုလည်း မညည်းစေနှင့် အဖျားကြီးတော့ဆေးရုံရောက်တတ်သည် မယားညည်းတော့အတွေးအကုန်ပျောက်တတ်သည် အကြွားကိုလည်း မလျော့နှင့် မယားကိုလည်း မချော့နှင့် အကြွားလျော့တော့လူအထင်သေးသည် မယားချော့တော့မူချင်သေးသည် အပြင်ကိုလည်းလမ်းမသလားနှင့် လင်ကိုလည်း အရမ်းမဖားနှင့် အပြင်ကိုလမ်းသလားတော့ အပျိုမှတ်ပြီး အငမ်းခံရတတ်သည် လင်ကိုအရမ်းဖားတော့အပိုထပ်ပြီးအနမ်းခံရတတ်သည်
Post By : What do u say
ကိုယ့်ခံစားချက်နဲ့ တိုက်ဆိုင်နေတဲ့ သီချင်းလေးတွေကို နားထောင်မိတဲ့ အခါတိုင်း မျက်ရည်ခရတဲ့အထိ ခံစားရပါတယ်.....
Post By : ပိုးစံပယ်
Post By : maywathonemoe@gmail.con
သီချင်းလေးတွေမှာ အသည်းကွဲသီချင်းလေးတွေကိုပိုကြိုက်တယ် ဒါကြောင့်လားတော့်မသိဘူးဗျ အသည်းခဏခဏ ကွဲနေသလိုပဲလေ အဟီး အသည်းကွဲသီချင်းလေးတွေက နားထောင်ကတာ ခံစားချက်ရှိတော့်ပိုကောင်းတယ် ဒါကြောင့်ကြိုက်တယ်
Post By : ဇွဲဆုပိုင် (emopunklay09@gmail.com)
တိုက်ဆိုင်မှုတွေရှိရင် အရမ်းခံစားရတယ် ဘယ်ဘက်ရင်ထဲမှာ အောင့်နေတာပဲ
တိုက်ဆိုင်မှု ရှိတဲ့သီချင်းကြားမိလို့ရှိရင် ဘယ်ဘက်ရင်အုံ အောင့်သက်သက်နဲ့။
တို.ကိုအေးစက်ပြီးရက်စက်တက်အောင်သင်ပေးသွားပြီပဲ အချစ်သီချင်းကဘယ်လိုလုပ်ခံစားတက်စေမှာလဲ အားလုံးကအေးစက်သွားပြီပဲ အချစ်သီချင်းကိုမခံစားတက်တော့ပါဘူး
Post By : မချစ်တက်သောမိန်းကလေး
Post By : ကြယ်စင်နတ်သမီး
ကိုယ့် အကြောင်းနဲ့ တိုက်ဆိုင်နေရင်တော့ ၀မ်းနည်းမိ မှာ ပါဘဲ..ဗျာ.သီချင်းကောင်းဆိုတာ ကလူတစ်ယောက်ရဲ့ ရင်ကို ၀မ်းနည်းစေနိုင် သလို ပျော် လည်းပျော် ရွင်စေနိုင် ပါတယ်..အလွမ်း သီချင်း ကို သိပ်မကြိုက် ပါဘူး..လူစိတ် ကိုမြူးစေမယ့် သီချင်းဆို ရင် အရမ်းသဘောကျတယ် ဗျ.......
တခါတလေသတိရတာများလာရင်..သီချင်းနားထောင်ပြီးခံစားရတဲ့ ချက်ကိုအရမ်းကြိုက်တယ်...အသည်းကွဲကွဲခဲ့ရင်တောင်ကျွန်တော်အတွက်ကတော့ သီချင်းတွေကအသည်းကွဲတာတောင်ပျောက်တယ်လို့ထင်တယ်
Post By : myheart
Post By : ခရစ်ယာန်ဘာသာဝင်တစ်ဦးကိုချစ်နေမိသောဘာသာမတူသောမိန်းကလေးတစ်ဦး
အေးအေးလေးနဲ့ ငြိမ့်ငြိမ့်လေးပေါ့။ အင်း ---- သူ့ကိုအရမ်းသတိရမိတာတော့အမှန်ပဲ။ ဖြစ်နိုင်ရင်အချိန်တိုင်းအနားမှာရှိစေချင်တယ်ကွာ။
Post By : linyaunghshin.zzl@gmail.com
Post By : moenatthar297@gmail.com
ကျနော် psychology class ယူတုန်းက ဆရာကပြောတယ် သီချင်းတစ်ပုဒ်နားထောင်ရင်ဘာကိုမှ မစဉ်းစားနဲ့တဲ့ သိလား ဘာလို့လည်း ဆိုတော့ ဒီသီချင်းကို စပြီးနားထောင်တဲ့အချိန်မှာ လူတစ်ယောက်ကိုစဉ်းစားလိုက်ဗျာ ဥပမာ... ရည်းစား မိဘ မောင်နှမ တစ်ယောက်ယောက်ပေါ့ ဒါဆိုရင် အဲဒီသီချင်းနားထောင်တဲ့အခါတိုင်း ပထမဆုံး နားထောင်ခဲ့ စဉ်က စဉ်းစားမိတဲ့လူကို သတိရနေမယ်လေ ဒီသီချင်းနားထောင်တိုင်းမှာ သတိရမယ်။ အဲဒါကြောင့် ကျနော်ဘယ်တော့မှ သီချင်းကို ခံစားချက်နဲ့နားမထောင်တော့ဘူး ဟဲဟဲ
လက်ရှိခံစားနေရတဲ့ ခံစားချက်ကို ပြောင်းလဲစေနိုင်တယ်။ (စိတ်ညစ်နေသည့်တိုင် ခပ်မြူးမြူးလေးတွေနားထောင်လိုက်ရင် စိတ်က အလိုလိုတက်ကြွလာတယ်)။ နောက်ပြီး လွမ်းနေတုန်း အလွမ်းသီချင်းကို နားထောင်လိုက်ရင်လည်း ပိုလွမ်းလာသလိုပဲ
Post By : ဇူဇူး
Post By : ကောင်းကင်ပြာ
သိချင်းဆိုတာ အနုပညာခံစားချက်လေးပါ..သူဘောင်လေးနဲ့ပဲခံစားစေချင်တယ်..ဆိုတဲ့သူတွေကကော တကယ်ခံစားရချင်မှ ရမှာလေ..အဲတော့ သူဘောင်၊သူကမ္ဘာလေးမှာပဲ ခံစားဖို့လိုတာပေါ့နော်.. ကိုချစ်သူကိုသတိရလို့၊လွမ်းလို့ဆိုပြီး မရောမိစေနဲ့ပေါ့၊သီးသန့်လေးပဲ ခံစားရတာ ရင်ကိုထိမယ်လို့ထင်ပါတယ်..အားလုံး သီချင်းနဲ့ကိုယ့်ရဲ့အချစ်နဲ့မရောနဲ့နော်..ညစ်ပတ်သွားလိုက်မယ်..ok?
Post By : ခန့်..
်ငိုချင်တာပေါ့ သူကိုလည်း အရမ်းသတိရတယ်
Post By : မ
ရွှေစင်ကသီချင်းတွေကိုအမျိုးအစားသိပ်မရွေးတက်ပါဘူး သီချင်းတွေကိုခံစားချက်နဲ့တိုက်ဆိုင်ရင်အရမ်းခံစားတက်တယ် နောက်ပြီးခံစားချက်ချင်းမတူရင်တောင်သီချင်းကိုလိုက်ပြီးခံစားတက်တယ် အလွမ်းသီးချင်းတွေဆိုရင်ပိုခံစားရတယ် ဘယ်သူ့ကိုလွမ်းမိမှန်းမသိဘူးလေ
Post By : ရွှေစင်
စုကတော့ အချစ်သီချင်းတွေဆို ကိုယ့်ခံစားချက်နဲ့မကိုက်ညီလည်း .. သီချင်းရဲ့ အဓိပ္ပာယ်ကို လိုက်ပြီး ခံစားပေးလို့ရတယ် .. အလွမ်းသီချင်းတွေဆိုရင်တော့ .. အရမ်းခံစားရတယ်..
သူ့ကိုစတွေ့ခါစကတော့ အချစ်ဦးမို့လို့ " ပန်းလေးတစ်ပွင့် " သီချင်းကို အရမ်းကြိုက်ခဲ့တယ်။အခုတော့တို့ရင်ကိုခွဲပြီးထားခဲ့သူကြောင့် "ခွင့်ပြုတယ်ခွင့်လွှတ်တယ် " ဆိုတဲ့သီးချင်းလေးကို ခံစားပြီးတော့လွမ်းနေမိတယ်။
Post By : နှင်းဖြူ
ကိုယ့်ခံစားချက်နဲ့ကိုက်ညီတဲ့သီချင်းတွေဆို အရမ်းခံစားရတယ် ဘာကိုမှမသိတော့အောင်သီချင်းထဲမှာနစ်မျောသွားတာ ဥပမာ-တစ်ဖက်သက်အချစ်မျိုးပေါ့ဗျာ
Post By : kaung
အချစ်သီချင်းဆိုတာလူကိုပျော်ရွင်စေတယ်လို.ထင်တယ် ဒါပေမယ်. အချစ်=အလွမ်းလို.တော.မြင်ဘူးတယ်
Post By : မေအိမ်.ချစ်(angelstar142@gmail.com)
I AM NOT UNDERSTAND, "WHAT IS LOVE?" so i am not feel
Post By : ၀ိုင်း
အချစ်သီချင်းကြားမယ်ဆိုရင် ခံစားချက်မရှိလောက်တော.ပါဘူး သူကကျွန်မကိုထားခဲ.ပြီးပြီပဲ အချစ်သီချင်းကိုနားထောင်ရင်းနဲ. သူပြန်လာပါစေလို.ဆုတောင်းနေမယ် ဒါပေမယ်.မျှော်လင်.ချက်မရှိတာကိုတော.သိပါတယ် မျှော်လင်.ချက်မရှိတာကိုပဲမျှော်လင်.ချင်တာပါ ကိုသားဖြိုးအတွက်
Post By : နှင်းဝေးငြိမ်း
အင်းတစ်ခုခုတော့ရင်ထဲမှာကျန်ခဲ့တယ် ဘာမှန်းတော့မသိဘူးလေ။ ပြောလို့ရတဲ့ ခံစားချက်တော့မဟုတ်ဘူး။ အရမ်းခံစားလို့ကောင်းမယ် ထင်တယ်လေ။ အခုတော့ အလွမ်းသီချင်းတွေကို ကြိုက်နေတယ်လေ။
Post By : spectrum
ရင်ခုံသံတွေကိုစည်းချက်ကျစေတယ် ။ကြည်နူးမှုတွေနဲ ဘဝထဲမှာပျော်ရွှင်စေတယ်လေ
Post By : ကိုကို
သီချင်းထဲက စာသားလေးတွေနဲ.အတူ ကြည်နူးမိတာပေါ.။
Post By : dagontiger1
ပျော်ရွှင်ကြည်နူးခြင်းနဲ့ လွမ်းဆွတ်တာတွေ နှလုံးသားထဲက သီချင်းလေးရဲ့စည်းချက်အတိုင်း ငြိမ့်နေတာပေ့ါ
အချစ်သီချင်းကို နားထောင်ရင်း ချစ်သူကို သတိရနေမယ်
Post By :့ သော်တာ
မင်းတို့တော့မသိဘူး ငါတော့ငါချစ်တဲ့ ငါ့ကောင်မလေးတစ်ယောက်က တခြားတစ်ယောက်ကို အဖြေပေးတော့မယ်ဆိုတော့ငါအခုခံစားနေ၇တယ် သူငယ်ချင်းတို့ ငါဘယ်လိုလုပ်၇မလဲ အကြံပေးကြပါကွာ
Post By : မိုးနတ်သား
Post By : ဇာခြည်
ဘယ်လိုပြောရမလဲ။ လက်ရှိအချိန်မှာ ဖြစ်နေတဲ့ခံစားချက်နဲ့ ဆိုင်မယ်နဲ့တူတယ်။ အခုချိန်မှာ အသည်းကွဲနေရင် အချစ်သီချင်းနားထောင်ရင် ဆွေးနေမိမယ်။ တကယ်လို့ ချစ်သူနဲ့ ဆက်ချစ်ခွင့်သာ ရနေမယ်ဆိုရင်တော့ ပျော်မိမယ်နဲ့တူတယ်။
Post By : ချစ်သူမောင်